Björnnässlingan | Nleta Hultsfred
hem » 🥾 Hụ & mee » 👟 Ihe omume » Andra Hike » Björnässlingan
2 ma ọ bụ 3,5km
Björnnässlingan bụ ezigbo ọhịa anwansi nwere pines ochie nke na-eguzo gburugburu okwute ndị osisi lichen kpuchiri. Ebe nchekwa Björnnäset dị na isi ala na Åkebosjön. Ebe nchekwa ahụ dị na mpaghara Stora Hammarsjön na ebe nchekwa ọkụkụ na mpụga Hultsfred. N'ebe a, e kwere ka osisi ndị ahụ too n'udo maka oke ọhịa nke oge a. Nwere ike ịhọrọ ịga ije nke kilomita 2 ma ọ bụ 3,5, ma na mpaghara ugwu.
Afọ ọhịa dị n’agbata otu narị afọ na afọ iri ise na ise. Na mpaghara enwere ma capercaillie na nwa grouse. Ọtụtụ ndị ọrụ ohia anyị na-elekwa ebe ahụ, gụnyere nnukwu mkpofu ojii ojii.
Björnnässlingan na Alltrails
Anụ ọhịa bea ahụ na Gaia
Björnnässlingan na Hiking Project
Björnnässlingan na n'èzí
Anụ ahụ na-agba na ntanetị na Nature Map
Anụ ọhịa bea nettle na Wikiloc
4.3 si 5.0
Nyocha 9 na Google
5/5 2 izu gara aga
M, vir na-anọkarị ebe ahụ😃. Onye na acho udo na udo nokwa ebe ahu😃
Na-atụghị anya ya mara mma ibugo onu! Otu n'ime ọkacha mmasị na mpaghara Vetlanda / Målilla. Maintainedzọ echekwara nke ọma, oke ọhịa mara mma nke ukwuu nke nwere nkume tụbara. E nwere lichen ngosi ọkara. Jụụ! Akụkụ nke ụzọ ahụ na-agafe akụkụ nke oke ọhịa ọkụ. Ahụmịhe dị jụụ iji hụ ihe na-adịgide ndụ na otu esi agbanwe ihe. Gbakwunye maka blueberries niile na "nnukwu ụlọ" dị n'etiti nke bụ ezigbo kọfị.
5/5 afọ gara aga
Björnnässlingan bụ ọmarịcha akaghị aka na-agba na ebe nchekwa Björnnäset
5/5 ọnwa 7 gara aga
Ụzọ mara mma, akọwara nke ọma ka esi aga ije.
Ụzọ njem nlegharị anya mara mma nke ukwuu n'elu ugwu na ndagwurugwu n'akụkụ ọdọ mmiri abụọ yana site n'ọnụ ọnụ ugwu gbagọrọ agbagọ
All nzọ ụkwụ ụkwụ